HABKA HIRGELINTA HINDIDA-UKUNTA: SHARAXAAD IYO TALOOYIN - BEERAHA DIGAAGA
Ducks Muscovy, ama indouki, waxay noqdaan nooc caan ah oo digaag ah sababtoo ah daryeel sahlan iyo aan qabyo ahayn xaaladaha. Haddii khibradaada haynta shimbirahan yar yar tahay, oo aad jeclaan lahayd inaad ka hesho farcan, su'aalo dhowr ah ayaa dabiici ah oo ku saabsan waxa digaagga ay yihiin dumar dhallinyaro ah, imisa carruur ah, iyo sida loo xallinayo dhibaatooyinka suurtagalka ah ee la qaboojiyo.
Isla markiiba samee bakhsho ah in ducks moosu leeyahay dareen aad u fiican oo ah naqshad, taas oo aan ahayn kiis awoodooda hooyada. Sidaa darteed, si aad u hesho farciga iyaga ka mid ah waa hawl dhab ah. Waxay sidoo kale macno u tahay in shimbiraha laga helo cuntooyin ukun cuntooyinka, sababtoo ah xitaa noqoshada hilibka hilibka, Indoout waxay muujinaysaa tilmaamayaasha wax soo saarka wanaagsan (80-120 gogo / sannad), ugxanteedana way nafaqo badan yihiin marka loo eego ukumaha digaaga.
Ogow nooca cayayaanka ah ee ku haboon guriga taranka.
Imisa carruur ah ayaa ku fadhiya ukumaha, iyo marka ay ku fadhiistaan
Dhaqdhaqaaqa galmada ee ducks moos ah ayaa ku dhacda da'da 6-7 bilood, xaalado wanaagsan oo xabsi ah (oo ah qodobka ugu muhiimsan waa heerkulka ugu fiican) ayaa dhici karta horaantii, xaaladaha aan fiicneyn waxaa la daahinayaa dhawr bilood.
Isla markaad da 'yar tahay, dumarka waxay billaabmayaan inay dhigaan ukumaha. Si kastaba ha noqotee, ukumintoodu waxay dhacdaa xilliga gu'ga iyo xilliga dayrta waxayna socotaa ilaa laba bilood xilli kasta. Waa in la fahamsan yahay in inta jeer ee soo ururinta ukunku ay ku xiran tahay dareenka hirgelinta.
Marka loo eego xaaladaha dabiiciga ah, marka qiyaastii 15 gogoqadoodu ku ururaan buulkani, feathery diyaar ayuu u yahay habka. Celcelis ahaan, horumarinta ducklings waxay qaadataa 29 ilaa 35 maalmood.
Immisa ukumo ah ayaa ku dhejin kara dusha
Waa suurtogal in la go'aamiyo in gabadhu ay u diyaariso in ay ukumo ku celiso dabeecadeeda - shimbirta ayaa qoslaysa, la dagaallamaysa gumeysigeeda, raxmaddoodu waxay dadka kale ku wadi doonaan, buulkuna wuxuu bilaabmayaa inuu dego fiilada.
Celcelis ahaan, haweenku waxay ku shubtaa oo ku daraysaa qiyaastii 20 ukun, laakiin waa in maskaxda lagu hayaa in iyaga ka mid ah ay noqon karaan kuwo duqoobay oo aan habboonayn taranka taranka. Sidaa daraadeed, buulkuna waa in si joogta ah loo eegaa, wakhtiga si loo soo saaro tijaabooyinka aan habooneyn oo lagu soo koobi karo cusbada.
Waxay sidoo kale kaa caawinaysaa inaad ogaato marka indouin uu bilaabo inuu qaado ukumaha, sababta aysan u qaadin ukumaha, waxsoosaarka ukunta ee indoutok waa guriga, sida ay waxtar u tahay iyo sida aad u karin karto ukunta indooutka.
Waxa kale oo ay mararka qaar dhacdaa in dhammaan ugxanta oo dhan la dhigo hoostiisa, tani waxay halis u tahay inay disho faraca.
Waxaa suurtagal ah in la ogaado tirada ukunta ee loogu talagalay isugeynta iyada oo ku saleysan xajmiga dumarka: Dhallinyarada da'yarta ah ee dhexdhexaadka ah waxay awoodaan inay ku kulmaan 8-12 gogo ', shinbiraha waaweyn ee waaweyni waxay kululaan karaan ilaa 15 gogo'.
Xaaladaha ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'incubation'
Waxaad u baahan tahay inaad udiyaariso buulkeedii (buuxi qashinka cusub).
Ku rid buulkaba waxaa lagu talinayaa meel diiran, aamusnaan leh, meel aan la haynin iyada oo aan la qorin.
Shimbiraha kale (shimbiraha, digaagga iyo noocyada kale) waa in aaney helin ukumaha, haddii kale waxa badanaa laga soo qaadi karaa buulka.
Waa muhiim! Beeralayda digaagga ee khibrad leh ayaan ku talineynin in la dhigo in ka badan 15 ukun oo uum ah. Waa inay ahaadaan wax yar oo muuqaal ah oo ka yimaada bakeeriga bakeeriga ee fadhiga fadhiga.
Sida loo abuuro ukun ukunta
Sida ugu dhakhsaha badan duck bilaabay buulkeedii, waxaad u baahan tahay inaad isla markiiba abuurto shuruudaha iyada oo dhan si ay u kululaan farcankiisa. Sida aan hore u soo sheegnay, dareenka dhalinta ayaa ku xiran inta jeer iyo inta xajmeed ee aad qaadato ukunta.
Oo halkan waxaa jira dabagal: haddii aadan soo ururin dhammaan, markaa ka hor intaan la helin tiro ku filan, ugxanta badankeeda waxay noqon kartaa mid aan la isticmaali karin. Oo hadday cunaan inay wax walba qaataan, haweenku waxay diidi karaan inay ku fariistaan ​​xilligan oo dhan ama ay helaan meel ay ka baxsan tahay.
Daryeelka habboon ee ducks mooska, waxay kuu noqon doontaa mid waxtar kuu leh inaad barato sida indouka jiilaalka, sida loo kala saaro ragga haween madaxbannaan, waa maxay cudurrada indootok iyo sida loo daaweeyo.
Xaaladdan, waxaad u baahan tahay inaad ku tilmaanto khiyaamo - ukunta been abuurka ah, taas oo ka dhigan in haweenku si joogto ah u rusheeyeen aynaan bedeli doonin.
Nidaamka abuuritaanka indutice buulkeedii waxaa lagu sharxi karaa wax sidan oo kale ah:
In buulka diyaarsan, ku rid ukunta been abuur ah (waa in la calaamadiyaa).
Maalin 1-2 maalmood ah ayaad u baahan tahay inaad soo ururiso ukumaha gabadha lagu rido, ka dibna u jiifso. Waxaad u baahan tahay inaad wax walba soo qaadato, laakiin ka tag qaybo yar oo buul. Waxay u baahan yihiin in lagu kaydiyo wax ka badan 10 maalmood heerkul ah 10 ° C. Muddadan ka dib, isticmaalka badeecadaha farcankiisa waa mid aan macquul ahayn.
10-15 maalmood ka dib, nuugu wuxuu bilaabi doonaa in uu dhiso buul, laakiin waa suurtogal in aan si dhakhso ah u dhigin ukumaha, waxaad u baahan tahay inaad naag u bixiso dhowr maalmood si aad ula qabsato.
Marka duck ka baxo buulkaba socodka iyo quudinta, waxaad u baahan tahay inaad jiifsato ukunta badbaadiyey iyo soo saaro been ah. Dumarka waa in aysan wax arkin.
Ukunta waa in lagu dhejiyaa qaybta dabada.
Maalin kasta, marka haweeney ka baxdo buulkeedii, faraca mustaqbalka waa in si taxadar leh loo hubiyo.
Laga bilaabo 25 maalmood laga bilaabo wakhtiga dhalada, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo dhowr jeer maalintii, sababtoo ah chicks qaarkood ayaa dabooli kara dadka kale.
Waa muhiim! Qaadashada ilmaha waa in laga qaadaa haweenka illaa dhammaan inta kale ee farcankiisa soo baxaan. Ka dib oo dhan, duck, arkaya chicks ugu horeeya, joojin kartaa kululaynta.
Waa maxay sababta aan ukunnayn ukumaha
Inkastoo ducks mooska la xaqiijiyay inay noqdaan kuwo aad u fiican, mararka qaarkoodna ma bilaabi karaan habka isugeynta. Sababta tani u dhacdo iyo waxa la sameeyo - tixgeli xiga.
Sababaha ugu weyn ee ay sabab u tahay nuucaanu uusan bilaabin kuleelasho:
Adiga oo dhan ukumaha ka soo qaado buulka.
Dumar dhalinyaro ah ama gabow.
Buuqa sare, iftiin iftiin leh guriga.
Joogitaanka dulinka buulasha. Waxaad arki kartaa in gabadhu aanay fadhin, laakiin waxay ku taagan tahay.
Weerarka jiirka. Dukaammadu waxay xadidi karaan waxyaabaha ku jira buulkaba waxayna ka cabsi galin karaan feathery.
Haddii dhibaatadu ku jirto da'da shimbiraha, uma badna inay awoodaan inay wax qabtaan. Haddii shimbirku aad u yaryahay, waxaad u baahan tahay inaad ku siiso dhammaan xaaladaha oo sug ilaa inta ay gaboobaan. Haddii feathery uu yahay mid aad u weyn, inta badan waa la diiday. Falanqee, marar badanna adigaa ka saartaa ukumaha.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay mid ka mid ah noocyada, duck musqul wuxuu magaciisa ku helay sababo la xiriira xaqiiqda ah in dadka shakhsiyaadka hore loo xilsaaray awoodda ay u leeyihiin inay ka ilaaliyaan baruurta koritaanka madaxooda, taas oo urta miskaha.
Ku kaydi ukumo yar oo calaamadeysan oo buulkisa ah. Haddii ay daaweeyeyaasha ku jiraan, guriga waa in la daaweeyaa, gogosha waa la bedelayaa. Sidoo kale fiiri shuruudaha guriga iyo cuntada ee shimbiraha.
Ukumaha digaaga ayaa ku fadhiisan kara
Ficil ahaan, qaar ka mid ah jajabka ayaa ka warqabaya xaaladaha marka digaaga digaagga lagu dhajiyo qashinka oo ay ku guuleysteen inuu horay u soo galo ka hor. Haddii nuucaanu ku fariisan lahaa ukumaha kale qofku wuxuu ku xiran yahay nooca baaluqa.
Ducks Muscovy ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo xariif ah, sababtoo ah waxay aqoonsan karaan tayada saboolka ah (taas oo ah, mid aan fiicneyn ama la burburiyay) oo ukumaha ka saaraya. Maadaama ay digaaggu yar yahiin oo ay yeelan karaan midab kala duwan, duck ayaa si fiican uga takhalusi kara.
Baro niyadaada Indutei ee sii koraya guriga.
Waxa kale oo qiimo leh in la tixgeliyo qaar ka mid ah qaababka jirka-jirka - heerkulka jidhka ee ducks ayaa ka sarreeya digaagga, taas oo keeni karta dhimashada gufeyska. Sidoo kale, haddii aad go'aansatid hiddahaas, maskaxda ku hay in ducada caadiga ah miisaankeedu badan yahay digaag oo si sahlan u burburin kara ukumaheeda, taas oo sidoo kale leedahay qolof ah khafiif ah.
Haddii geeddi-socodka qandhada digaaggu caadi ahaan u socdo, waxaa lagama maarmaan ah in la raaco habka waxqabadka (19-22 maalmood) isla markiiba ka saar qashinka.
Iyadoo ay jirto xaqiiqda ah in ducks moos ku kulmi karaan xaalado kala duwan, waxaa lagula talinayaa inay raacaan tilmaamahan:
Cuntada muddada wareegista waa in ay ku saleysnaadaan hadhuudh qallalan, quudinta isku darka qoyan waa in la yareeyo ama la joojiyaa. Waa inaad sidoo kale hubisaa in caleemaha casiir leh oo casiir leh.
Qeybta labaad ee mudada kabadan, isku day inaad siiso aamuska shinnida. Laguma talinayo in aad qabato shaqada dhismaha ee guriga.
Xasuuso in xilliga dayrta tirada ukunta ukunta la bacrimay ay hoos u dhacdo, taas oo ah heerka caadiga ah ee jir ahaaneed.
Taangiyada biyaha waa in la dhigaa meel u dhow hareeraha si loo xaqiijiyo huurka qummanaanta. In iyaga, nasiibku waa inuu awood u yeesho. Dumarka qubeyska waa mid aad u faa'iido badan, sababtoo ah qoyaan ka soo baalasheeda ayaa saameyn togan ku leh is-beddelka gaaska ee faraca iyada oo loo marayo qolofka.
Feeders waa in sidoo kale ku yaal meel u dhow buulkaba si ay u yar yar ee suurtogalka ah iyo in yar inta badan ka baxo.
Shimbiraha quudinta waxay u baahan yihiin inay sameeyaan jadwal cad.
Maalinta shimbir waxay socon kartaa illaa 1-1,5 saacadood mar. Haddii ay ku shubeyso chicks inta lagu jiro xilliga qaboobaha, hawo cusub waa inay galaan qolka marka daaqadu furan tahay.
Si aad uga hesho faraca mashiinka miskaha ah waa hawl suurta gal ah xitaa dhoobada cusub ee digaaga.
Ma taqaanaa? Shimbirta waxaa lagu iibsaday by Aztecski hore.
Dumarka noocyadani waxay leeyihiin dareen-wanaaga wanaagsan. Waxa ugu muhiimsan waa in la siiyo shuruudaha ugu yar ee ilaalinta iyo quudinta, iyo muuqaalka muuqaalka dhalashada ma qaadan doono muddo dheer.